Abantu baseMelika mabavuya ukuba umncedisi kaGoogle & apos; s & apos; ungenzi nto 'imo ayifumaneki kwilizwe
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Abantu baseMelika banokonwaba ukuba i-Google Assistant kunye ne-apos's s 'Ungenzi nto' ayifumaneki kwilizwe
Sihlala sichaza ukuba uMncedisi kaGoogle ungoyena mncedisi wedijithali onjani. Ngokungafaniyo noSiri, edla ngokubhekisa kubasebenzisi kwiphepha lewebhu ukufumana impendulo yombuzo, uMncedisi kaGoogle uya kuthumela ngokuthe ngqo impendulo yombuzo. Ngelishwa, uya kuyibona isebenza rhoqo le nto xa ubuza umbuzo malunga apile isixhobo. Ukongeza, uSiri ubonakala enengxaki enkulu ukuzama ukuqonda eminye yemibuzo ebuzwayo.
Umncedisi kaGoogle & iiapos; Ungenzi nto kwimowudi ephendula ngeempendulo ezingenzi nto
Ngokwe-AndroidPolice kukho imo entsha 'Ungenzi nto' eyenzayo, kulungile, akukho nto. Ngelishwa nangona kunjalo, uninzi lwenu aluyi kuba nakho ukubona uphando Umncedisi 'ungenzi nto' kuba inqaku liphuhlisiwe ngokudibeneyo neCadbury kunye neapos 5 Star, ibha yetshokholethi ebonelelwa kwiimarike ezinqamlekileyo kubandakanya iIndiya. Ukuvula imo 'Ungenzi nto', ungathi 'Yitya iNkwenkwezi ezi-5' kwenye yeemarike ezixhasa inqaku. Nje ukuba imo 'Ungenzi nto' yenziwe yasebenza, uMncedisi kaGoogle uthi, 'Ndiziva ndingenzi nto ngoku. Kwaye ndiza kukunceda uphole. Ndibuze kwanto.'
Iimpendulo ezivela kuMncedisi kaGoogle kwimowudi ethi 'Ungenzi nto' ziyinxalenye elinganayo ezihlekisayo nezilinganayo ezingenamsebenzi. Umzekelo, kule ndlela ukuba ubuza uMncedisi kaGoogle 'I-Egg-yokuqala okanye iNkukhu?,' Impendulo iya kuba 'Kuxhomekeke kulowo ubu-odole kuqala.' Ayisiyo mpendulo ngqo eya kuthi ibangele ukuhleka okanye ezimbini, kodwa olo luhlobo lwenqaku. Buza i-salon ekufutshane kwaye ungafumana impendulo kuMncedisi kaGoogle othi, 'Wena & Apos sinenhlanhla. Amashiya amdaka, amakhwapha anoboya kwaye akukho zifoto zokuzilungisa ezisefashoni. ' Buza malunga nemozulu, kwaye uMncedisi kaGoogle uzakuthi, 'HaHa ... ngokungathi wena uza kuphuma.'
Emva kokusebenzisa ezinye zezi ziqhulo, mhlawumbi kunjalo nokuba uMncedisi kaGoogle 'Ungenzi nto' akanakwenziwa ukuba asebenze kumazwe.
Umhla wokukhutshwa kwe-lg v30 e-usa
Iindlela ezili-10 zeSamsung enye ye-UI ibhetele kune-stock Android
Emva kokuxhasa ukudityaniswa kweT-Mobile / Sprint, iTracfone iya kukhetha eyona nethiwekhi ngeSmartSIM
Eyona fowuni iphakathi yexabiso eliphakathi efikelelekayo kwi-2020
Ukuthelekisa i-Samsung Galaxy Note5 kunye ne-Samsung Galaxy S6